UK : Waxbarasho U Dhiganta Jaamacad Oo aan Lacag Laguugu Yeelanayn | shumis.net
Home » Layaab » UK : Waxbarasho U Dhiganta Jaamacad Oo aan Lacag Laguugu Yeelanayn
UK : Waxbarasho U Dhiganta Jaamacad Oo aan Lacag Laguugu Yeelanayn
Inaaad aadid jaamacad ayaa mar walba loo arkaa inay tahay guusha ugu saraysa ee cilmiga iyo jidka ay maraan dhalinyarada. Laakiin dadka qaar ayaa ka leexanaya caadadan oo qaadanaya waxbarasho ka duwan.
Markii Radhika Parmar oo sagaal iyo toban jir ah ay dhamayso waxbarashadeeda afarta sano iyo barka waxay qaadan doontaa shahaadada BSc Hons Degree ee Digital & Technology Solution. Laakiin Parmar oo ka duwan ardayda kale ma bilaabayso shaqo iyadoo lagu leeyahay lacagtii jaamacada ay ku dhigatay mana raadinayso shaqo.
Radhika Parmar ayaa dhamaysay sanadkii koowaad degree-ga apprenticeship
Ma jiro lacag ay ku bixinayso waxbarashadeeda iyadoo dowladda qarashka qaar ay bixinayso inta kalena ay bixinayso shirkadda.
Iyadoo dowladda ay bilaawday habkan 2015, degree-ga nooca apprenticeships ayaa lagu bartaa maadooyinka injineerka iyo and teknoolajiyada. Qofka wuxuu qaadanayaa mishaar u dhaxeeya £17,511 oo noqonaya £24,652 markuu waxbarashada dhameeyo.
Arday qalin jabinaysa
Ardayda jaamacadaha ka qalan jabiya ayaa laga doonayaa inay bixiyaan lacagta ammaahda ee ay jaamacadda ku dhigteen
Title: UK : Waxbarasho U Dhiganta Jaamacad Oo aan Lacag Laguugu Yeelanayn